Fahasalaman'ny maso :: Hotilina katarakta maimaimpoana ireo zokiolona • AoRaha
Fahasalaman’ny maso Hotilina katarakta maimaimpoana ireo zokiolona
Natomboka, omaly, ary hotohizana amin’ny sabotsy ho avy izao ny fitiliana kataratka sy fizahana maso maimaim-poana ho an’ireo zokiolona, 60 taona no ho mihoatra, eto Antananarivo renivohitra. Fanohizana hatrany izay mahasoa ny mponina eto antoerana eo amin’ny lafiny ara- pahasalamana sy ny ara-tsosialy no anton’izao hetsika, izay karakarain’ny fitaleavana ny asa sosialy eo anivon’ny kaominina Antananarivo (KAR) etsy amin’ny BMH Isotry, izao. Mahatratra telo sy telonjato ireo zokiolona efa nisoratra anarana teny amin’ny kaominina hanao fitiliana raha dimampolo sy efajato no andrasana amin’izany.
“Tanjona ny hahafahana manao ny fandidiana ny katarakta mba hamerina ny fahitan’ireo zokiolona ireo. Raha voatily fa misy ny katarakta dia alefa manatona eny amin’ny HJRA hodidiana maimaim-poana izy ireo. Manome toromarika sy torohevitra kosa ny mpitsabo amin’ny fanaovana fizaham-pahasalamana sy ny fividianana solomaso amin’ny vidiny mirary raha misy fahavoazana hafa ny maso”, hoy Raharinandrasana Hajatiana, talen’ny sosialy sy ny fahasalamana eto anivon’ny KAR.
Fiaraha-miasa eo amin’ny hopitaly sy ny KAR sy ny “Lions Sight First Madagascar” ary ny mpiara-miombon’antoka no ahafahana manao izao hetsika izao. Teo koa ny fiaraha-miasa tamin’ny Fizoma na fikambanam-ben’ ny zokiolona eto Madagasikara amin’ny fanampiana amin’ny fitadiavana ireo zokiolona hisitraka fitiliana. Ny fahafatesan’ny sela ao amin’ny maso no mahatonga ny katarakta ho an’ireo zokiolona, hoy ny mpitsabo teny an-toerana.